Stamping zvikamu Vagadziri & vatengesi - China Stamping zvikamu fekitori
Stamping Zvikamu 4
Kushanda kwezvikamu zvekutsika 1. Magetsi zvikamu zvekutsika chirimwa. Rudzi urwu rwefekitori indasitiri nyowani, iyo inokura pamwe nekuvandudzwa kwemidziyo yemagetsi. Aya mafekitori anonyanya kusimbiswa kumaodzanyemba. 2.Mota nedzimwe maindasitiri zvikamu zvinotsikwa. Inonyanya kuumbwa nekubaya uye kuveura. Mazhinji emabhizimusi aya ndeemamwe mafekitori ezvikamu uye zvimwe zvakazvimiririra zvekutsika zvirimwa. Parizvino, kune akawanda mafekitori madiki akatenderedza imwe mota factorie ...
Stamping Zvikamu 5
Stamping Zvikamu 6
Stamping Zvikamu 7
Stamping Zvikamu Zvakadzika Dhirowa 8
Stamping Zvikamu 10
Stamping Zvikamu 9
Stamping Zvikamu 11